Andry Rajoelina : Kandidan’i Ntsay Christian
03/08/2018 admintriatra 0
Tsy mila hiverenana be intsony angamba ny filazana fa ny MAPAR sy Andry Rajoelina no nanolotra an’i Ntsay Christian ho praiminisitra taorian’ny fanapahan-kevitra navoakan’ny HCC. Efa mazava ny amin’iny resaka iny fa ny zava-baovao tato …Tohiny
Fifidianana : Nametraka paikady ny zandarimaria
Manao hetsika avokoa ny avy eo anivon’ny polisy sy ny zandary handravana ny asa ratsy manerana ny Nosy ahafahana miatrika ny fifidianana am-pitoniana eto amin’ny firenena. Io no isan’ny niompanan’ny valan-dresaka nataon’ny Tale misahana ny …Tohiny
Fizahantany : Mbola lafo i Nosy-Be
Raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra iray misahana ny fizahantany ao Nosy-Be, dia mbola ankavitsiana ny Malagasy manatanteraka fitsidihana an’i Nosy-Be. Voalaza mantsy fa lafo dia lafo ho an’ny Malagasy ny manatontosa fizahantany ao amin’ity nosy ity. …Tohiny
Fasan’ny Karana : Mpandeha nahatrarana basy
Lehilahy iray 29 taona nahatratrarana basy vita gasy miaraka amin’ny bala maromaro sy basim-borona miisa roa no voasambotry ny Polisy avy ao amin’ny boriborintany fahadimy, teny amin’ny fiantsonan’ny taksiborosy eo amin’ny Fasan’ny Karana. Araka ny …Tohiny
Fankasitrahana. Noraisin’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina teny amin’ny lapam-panjakana teny Iavoloha omaly tolakandro, ny monsenera Désiré Tsarahazana, kardinaly malagasy vaovao, vao avy notendren’i Vatikan. Niara-dia tamin’ny tamin’izao fihaonana izao ny Nonce Apôstolika, monsenera Paolo Rocco Gualtieri ...Tohiny
Fetin’ny fahaleovantena : « Podium » sy Matso lehibe etsy Mahamasina
Hery Rajaonarimampianina : Ny fifidianana ihany no lalan’ny filaminana, azo atao ny mifampiresaka